Shiinaha u Taagan Beddelka Universal ee TV-yada Z500M warshad iyo soosaarayaasha | Zeno
Qaab No.: Z500M
Nooca Kordhintae: Istaaga Telefishanka
Nooca Dhaqdhaqaaqa: Wareeg
Summad: Customization La heli karo
Cabbirka TV-ga: 32 inji
Cabirka Ugu Yar ee iswaafajin kara: 26 inji
AP [CODSIGA BADAN] Ma aha oo kaliya miiska dusha sare ee TV-ga laakiin sidoo kale kormeerka istaaga. Waxay ku habboon tahay shaashadaha kombiyuutarka badankood VESA 75x75mm / 100x100mm / 200x200mm / 400x400mm. Ka takhalus habka cakiran ee iskudhafka buugaagta si kor loogu qaado dherer raaxo leh. qaansada ku The TV 2 qabsatooyinkoodii ka shaqayn sixitaanka height ka caawisaa looga hortago saamaynta caafimaad sida daal xad-dhaaf ah, dhaawac isha, qoorta, iyo dhabar xanuunka. Raaxo yeelo oo waxbadan qabso!
ES [Design Design HUMANIZED] Cagaha cirbadaha oo aan siibiibix ahayn ayaa ka ilaaliya dharkaaga ama dusha sare ee madaddaalada xagashada. Muraayadaha culus ee culus iyo walxaha birta adag ayaa siiya amniga iyo xasilloonida TV-gaaga. Waxaad ku maamuli kartaa buul buxan buuqsan oo fiilooyin ah adoo adeegsanaya xargaha xargaha ee la hagaajin karo. Marna ha ka welwelin miiska dushiisa mar dambe!
[Qancin iyo Dhaqdhaqaaq] Uma baahnid inaad qodo daloolo waxay ka ilaalin kartaa derbigaaga waxyeello. Waa mid saaxiibtinimo u leh kireystayaasha badankood ee ku nool guri kiro ah, abaarman, ama qol jiif ah. Waad ku rakibi kartaa naftaada xitaa haddii gabdhaha jilicsan. Saldhiggan tv-ga si habboon ayaa loo isugu soo ururin karaa loona kala sooci karaa kaas oo kuu oggolaanaya inaad si fudud ku qaaddo mar kasta oo aad u guurto guri cusub.
● [XASILOONIDA WITH SECURITY silig & hagaajiyey galaas SALDHIGA]: TV Buur taagan daray lacagihii-ammaan silig ammaanka dheeraad ah oo wax ku ool ah ka hortagtaa TV tip-badan accidents.If kasta kids iyo xayawaanka guriga, waa doorashada ugu fiican ee loogu talagalay ilaalinta! Muraayadda madoow ee madow ayaa siinaysa taabasho dheeri ah nidaamka tiyaatarka gurigaaga adiga oo siinaya nabadgelyo iyo xasillooni markaad qalabkaaga korayso
[QORSHEEY U DHEXEEYA] Telefishanka Universal wuxuu istaagayaa inta badan 23 ilaa 55 with LCD LED oo leh VESA 75x75mm / 100x100mm / 100x200mm / 200x100mm / 200x200mm / 200x300m m / 200x400mm / 300x200mm / 300x300mm / 400x200mm / 400x300mm / 400x400mm, waxay ku habboon tahay inta badan TV-yada sida Samsung LG, Sony, Vizio, Toshiba, Panasonic, Insignia, TCL, iwm.
Xirmo: 1x istaag TV, 1 x qalabka rakibida
Faahfaahinta faahfaahsan ee P4:
Ku habboon 26 ″ -32 ″
Awood Xamuul 40kg / 88lbs
Fogaanta gidaarka 520mm
Gudaha Sanduuqa 48 * 25 * 5.8cm
kumbiyuutarada / kartoonka 4.06KG
Sanduuqa Dibedda 49 * 32 * 26.5cm
Hore: Projector Fuula T218 / W
Xiga: Qaybta Taleefanka Qalabka Fidiyaha ee TV-ga Fallaaraha Mount HT001 (14 ″ -42 ″)
Cantilever Tv Istaag
Taleefanka Dhaqdhaqaaqa Tv
Rolling Tv istaag